कांग्रेसमा सभापति देउवा, आरजु तथा त्रिवि उपकुलपति लगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै १२ सय उजुरी | Suvadin !
कांग्रेसमा सभापति देउवा, आरजु तथा त्रिवि उपकुलपति लगायतलाई कारबाहीको माग गर्दै १२ सय उजुरी
May 19, 2019 11:54
काठमाडौं । पार्टी अनुशासनविपरीत काम गरेको भन्दै कांग्रेस अनुशासन समितिमा एक हजार दुई सय उजुरी परेका छन्। निर्वाचनमा आफ्नो उम्मेदवारलाई सहयोग नगरेको, विपक्षी दलको उम्मेदवारलाई जिताउन भूमिका खेलेको, टिकटमा मनोमानी भएकोजस्ता विषयमा बढी गुनासो परेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय स्रोतले जनाएको छ। यसअघि सम्पन्‍न स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई हराउन भूमिका खेल्ने कांग्रेसीहरुविरुद्ध बढी उजुरी परेका छन् । जसमा सभापति शेरबहादुर देउवा, देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा तथा त्रिवि उपकुलपति तिर्थराज खनियाँसम्मलाई कारबाहीका लागि उजुरी परेको कांग्रेस श्रोतले जनाएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध उजुरी परेको छ। गोरखाका महासमिति सदस्य राजेन्द्र बजगाईंले सभापतिविरुद्ध उजुरी दर्ता गराएको बताएका छन्। गत वर्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विरोध गर्नुपर्नेमा समर्थन गरेको भन्दै उनले सभापतिमाथि कारबाही मागसहित उजुरी दिएको सार्वजनिक गरेका थिए। ‘संसदीय पार्टीको मूल्य र मान्यता नै कांग्रेसले गुमायो भनेर मैले सचेत गराउन खोजेको हो।
निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवारलाई अन्तर्घात गरेको भन्दै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. तीर्थ खनियाँविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। कांग्रेसको महासमिति सदस्यसमेत रहेका खनियाँ गत संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चितवनबाट सिफारिसको सूचीमा परेका थिए। तर, उनले टिकट पाएनन्।
स्याङ्जामा गोपालमान श्रेष्ठकै कारण निर्वाचन हारिएको भन्दै पुराना नेता भोजराज अर्यालले उजुरी दर्ता गराएका छन्। प्रभावशाली नेता श्रेष्ठले उम्मेदवार मिलाउन नसक्दा आफू पनि हारेको र पार्टीलाई पनि हराएको आरोप उनीमाथि लागाइएको छ
डडेल्धुरा जिल्ला सभापति कर्ण मल्ल, नुवाकोट जिल्ला सभापति एवं सांसद जगदीश्वरनरसिंह केसी, दैलेख जिल्ला सभापति कृष्ण बिसी, जुम्लाका सांसद ललितजंग शाही, जुम्लाका सभापति जितबहादुर शाही र रुकुमकी सांसद मिठु मल्लविरुद्ध पनि उजुरी परेको छ। जापान र बेल्जियमको जनसम्पर्क समितिमा हस्तक्षेप गरी अधिवेशन गर्न नदिएको भन्दै मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलविरुद्ध उजुरी परेको स्रोतले बतायो।
अनुशासन समितिले तीनै तहको निर्वाचनमा देशभरका बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकको विवरण मागेको थियो। तर, केही जिल्लाबाहेक अन्यले अझै बागीको विवरण पठाएका छैनन्। ‘केही जिल्लाबाट आएका छन्, तर केही जिल्लाबाट नियतवश आएनन्, यसले पनि छानबिनमा ढिलाइ भएको छ,’ कँडेलले भने। सम्बन्धित जिल्लाको नेतृत्वले बागी उम्मेदवार, तिनका प्रस्तावक र समर्थकको सूची पठाएपछि विधानअनुसार उनीहरू स्वतः पार्टी सदस्यबाट बर्खास्त भइसकेका छन्। उनीहरूमाथि संस्थागत रूपमा पनि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढ्ने अर्का अनुशासन समितिका अर्का सदस्य किशोरसिंह राठौर बताउँछन्।